လန်ဒန်မှာ ဘာပွဲလုပ်လုပ် မပါတော့.. ဟု ဇာဂနာ ပြောဆို ~ Myanmar Express
လန်ဒန်မှာ ဘာပွဲလုပ်လုပ် မပါတော့.. ဟု ဇာဂနာ ပြောဆို
From : ဇာဂနာထပ်မံရှင်းပြပါရစေ။ ပွဲပြီးသည်အထိ ကျွန်တော့်လက်ထဲအစီအစဉ်စာရွက်ရောက်မလာပါ၊ ဃခုကဲ့သို့ကြီး ကျယ်ခမ်းနားသော ပွဲမှာစင်ခုံမန်နေဂျာ တစ်ယောက်မှမရှိပါ၊ အန်တီကို လာပေးသမျှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို မိုင်းရှာ ကိရိယာဖြင့်မက်ထရို ပိုလီတန်ရဲများကရှာဖွေစေပြီး ကျွန်တော်တိ့ကိုယ်တိုင်တစ်ထုပ်ချင်းဖောက်ပြရပါသည်။ အခမ်းအနားမှုး တစ်ယောက်အနေဖြင့်လုပ်ပေး စရန်မလို အပ်ပါပဲအောက်ကျခံပြီး လုပ်ပေးခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာပြည်မှာပင် လျင် ရဲ ခိုင်းသည့် အလုပ်မလုပ်ခဲ့သော်လည်း လန်ဒန်ပွဲ အနှောင့် အရှက်မဖြစ်အောင် သည်းခံခဲ့ရပါသည်။ ထိ့ပြင့ခေတ်ဆန်းချိန် သီချင်းဖြုတ်လိုက် သဖြင့ စိတ်ဆိုးကုန် ကြသူများပြေ လည်အောင်ပြန်လည် ကပြခွင့်ရရရေး အတွက် ဇာတ်ရုံတာဝန်ခံများ ကိုရောအန်တီ ကိုပါမေတ္တာ ရပ်ခံတောင်းပန်ပြီး ပွဲဆက်ကပြနိုင်ရန် ချက်ချင်း ကမောက်ကမ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရေးမပါတဲ့ ဆရာတော်များ အစီအစဉ်ကိုတော့ အစကတည်းက မလိုအပ်ဘူးထင်လို့ ကျော်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထံသို့လဲ ထိုဖြစ်စဉ်အားလုံးတင်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါတောင်မှ မကျေနိုင် မချမ်းနိုင် ဖြစ်ဖြစ်နေသး လန်ဒန်ရောက်မြန်မာများ အားလည်း စိတ်ပျက်ပါသည်။ နောက်တခါ လန်ဒန်မှာဘာပွဲလုပ်လုပ် ဘယ်တော့မှပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ပါ။ ကိုသူရ (ခ) ကိုဇာဂနာMyanmar Express
ဘာပဲပြောပြောပါ .. ထောတော့ ထောသွားတယ် မှတ်လားး
26 June 2012 18:38
မင်းကို ဘယ်သူက ပါဝင်ခိုင်းလို့လဲကွ....... ဇာဂနာရဲ့ မင်းဘာသာမင်း လီးရှည်ပီး လုပ်တာကိုး........ အမျိုးယုတ်ရဲ့
26 June 2012 18:43
fuck u zarganar.အရေးမပါတဲ့ဆရာတော်တွေတဲံ့.communist zarganar. don't come back to Myanmar.
26 June 2012 22:41
ဇာဂနာဆိုတဲ့ စောက်ရူးရဲ့- မြန်မာပြည်မှာတုံးက ရဲခိုင်းတာမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ဟိုကရဲနဲ့တွေတော့ မင်းဖင်ခံခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ဗုဒဘာသာဘုန်းကြီးတွေကို မင်းကအရေးမပါတဲ့ ဆရာတော်များလို့ပြောတာက မင်းကိုယ်တိုင်က ကုလားတွေဆီမှာ ရသမျှယူထားပြီးတာမို့ သက်သက် မသိသလိုနဲ့ ဆရာတော်တွေကို ဒေါက်ဖြုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဖူးလား။ မင်းဒီတခါ လန်ဒန်လာရင် ဆုပေးဖို့ရှိတယ်။ဘိုနီပေးမဲ့ဟာမျိုး ၊ လာခဲ့ပါအုန်းတဲ့။
27 June 2012 00:19
က မောက် က မ လူ တွေ လုပ် တော့၊ အား လုံး က က မောက် က မ ဖြစ် ကုန် တာ ပေါ့။ ဆ ရာ တော် တွေ ကို လူ များ တိုင်း ပြည် မှာ ပို ပြီး ဦး ထိပ် ထား ဆက် ဆံ သင့် ပါ တယ်။ ဗု ဒ ဓ ဘာ သာ မြန် မာ လူ မျိုး ဆို ရင် ပေါ့ ---
27 June 2012 02:05
စောက်ရုး ဇာဂနာမင်းမို့လို့ ဆရာတော်တွေ ကိုပြောရက်တယ်တော်တော် မိုက်ရိုင်း တယ်မင်းမျက်နှာကို မမြင်ချင်ဘူး ထောင်ထဲပြန်ဝင် နေ
27 June 2012 02:12
ဖင်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်းသောက်ချင်ကြဦးဒီပွဲလေးတောင် ဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ်နိုင်ကြလို့လားပြောတော့ ဒီမိုကရေစီလုပ်သမျှပွဲတိုင်းက တရုန်းရုန်းပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက် အိနြေ္ဒရရ မြန်မာပွဲတစ်ပွဲလောက်တက်ချင်စမ်းဘိကွာ
27 June 2012 02:14
27 June 2012 11:26
အရေးမပါတဲ့ ဆရာတော်များ အစီအစဉ်ကိုတော့ အစကတည်းက မလိုအပ်ဘူးထမင်းအမေလိုး အရေးမပါတာ လားငါလိုးမသား..မိုက်ရိုင်းလိုက်တာကွာ
စောက်ရူ့း-ကုလားကတုံးကို လန်ဒန်ရောက်မြန်မာများမှ စိတ်ပျက်ပါသည်။ ဘယ်တော့မှ ပါဝင်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ပါ။
28 June 2012 00:49
28 June 2012 02:47
ငါ လိုး မ သား စောက် သုံး ကို မ ကျ ဘူး
ခွေးရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်ချုပ် က မေတ္တာတရားဆိုတာမသိပဲနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်မ နေနဲ့ နင် လိုကောင် မျိုးက တကျွန်းနဲ့ပဲ တန်တယ်
စောပေါ ဇာဂနာ ထောင်ထဲ သွားနေ
14 October 2012 11:06
14 October 2012 11:08
11 February 2013 14:08
လျှောက်ပြောမနေနဲ့ စောက်ရူးကတုံး..မင်းဟောပြောတာတွေ. လုပ်နေတာတွေ အားလုံး စောက်ရူးအလုပ်.. .ထင်ရာမြင်ရာပြောနေတာတွေကိုရပ်တန်းကရပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်....ပြည်သူတွေကို သွေးထိုးမြှောက်ပေးပြီး ထောင်ထဲကအကြောင်းတွေ ကို အရသာခံ .လုပ်မနေတော့နဲ့ စောက်ကတုံးမသာရဲ့
Dont talk.about sanghas.
[image: Photo: သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် သမ္မတအိုဘားမားတို့ အိမ်ဖြူတော်၌ သမိုင်းဝင် တွေ့ ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ြေ...
၈၈အရေးတော်ပုံ မှတ်တမ်းပုံရိပ်မြင်ကွင်းနဲ့ ‘ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စေမင်း ’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်း
မြင့်မိုရ်ဦး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ရိုက် ကူးတဲ့ ‘ကောင်းကျိုးကိုယ်၌
တည်စေမင်း’ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က စတင်ပြီး မန္တလေး မြို့အုန်းချောမှာ ရိုက...
“နောက်ကျော ဓားနဲ့ အထိုးခံခဲ့ရတာ” ဆိုတဲ့ ဦးလွန်းမောင်
ဦးလွန်းမောင်ကို ၎င်း၏ အောင်ပြည့်စုံ ထမင်းဆိုင်ကောင်တာတွင် ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
၉ နှစ်တာမျှ နိုင်ငံတော် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်ေ...